WARBIXIN: Saddex Xal Oo Uu Tababare Zidane Ku Xalin Karo Bixitaanka Danilo Ee Xagaagan – Kooxda.com
Home 2017 July Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Saddex Xal Oo Uu Tababare Zidane Ku Xalin Karo Bixitaanka Danilo Ee Xagaagan
WARBIXIN: Saddex Xal Oo Uu Tababare Zidane Ku Xalin Karo Bixitaanka Danilo Ee Xagaagan
Wargayska As ee ka soo baxa dalka Spain ayaa warbixin ka diyaariyay dookhyada uu tababare Zidane haysto ee uu ku buuxin karo daafaca reer Brazil ee Danilo oo lala xiriirinayo in uu kooxda ka tagayo xagaagan.
Warar badan ayaa xaqiijiyay in ay kooxda Chelsea ee hanatay horyaalka Premier league ay heshiis la gaartay xiddigan reer Brazil iyada oo ku qaadan doonta lacag dhan 30 Milyan oo euro.
Hadba hadii uu xiddigan ka tago kooxda Real madrid waxa ay noqon doontaa in uu Carvajal si joogto ah u ciyaari si xilli ciyaareedka dambe.
Waxa aanu warbixintan ku soo bandhigi doonaa dookhyada uu tababare Zidane ku buuxin karo booska uu xiddigan baneeyay hadii uu Carvajal ka dhaawacmo ama uu u baahdo nasiino.
1.In uu ciyaarsiiyo Natch iyo Theo:
Xalka ugu dhow uguna fududu ayaa ah in uu xiddigaha Nacho iyo Theo u isticmaalo in uu ku nasiyo carvajal iyada oo laban xiddig leh awood daafac oo fiican.
Tababare Zidane ayaa labadaas xiddig isticmaali kara booska Carvajal maadama ay labada xiddig yihiin xiddigo badal ah oo ayna ahayn xiddigo si joogto ah ugu ciyaari doona kooxda xilli ciyaareedka dambe.
Laakiin baqdinta ayaa ah in uu dhaawac soo gaaro wax ka badan hal xiddigi sidii dhacday xilli ciyaareedkii hore waxana dhici doonta in uu zidane baxar galo si uu u buuxiyo booska carvajal.
2.In uu kooxda koobaad u soo dalaco Achraf Hakimi:
Dookhyada u badnaan tababare Zidane ayaa ah in uu kooxda koobaad ku soo daro xiddiga 19 jirka ah ee Achraf Hakimi si uu ugu buuxiyo booska carvajal hadii uu nasiino u baahdo ama uu dhaawacmo.
Tababare Zidane ayaa Achraf Hakimi u qaatay kulamada isku diyaarita xilli ciyaareedkii hore waana xiddig mustaqabl ifaya ku leh kooxda boqortooyada.
3.In Uu Suuqa ka Raadiyo Badalkiisa:
Xalka kale ayaa ah in uu tababare Zidane badal ka raadsado suuqa si uu xaaladaha deg-deg ah u isticmaalo booska Carvajal ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub.
Xiddigaha uu u dhaqaaqi karo ayaa noqon kara midkood Djibril Sidibé daafaca monaco iyo Presnel Kimpembe daafaca PSG laakiin la soo saxiixashada labada xiddig ayaa noqon doonta mid lacag badan ku kalifaysa kooxda Los Blancos.